ktmkhabar.com - गहिरो श्वास लिनुका पत्याउनै नसकिने फाइदाहरु !
गहिरो श्वास लिनुका पत्याउनै नसकिने फाइदाहरु !
दैनिक केही समय गहिरो श्वास लिनाले तपाईंको स्वास्थ र जीवनशैलीमा धेरै सुधार हुन्छ । जब तपाईं चिन्तित या हैरान बन्नुहुन्छ, तब तपाईंको मुटुको धड्कन लगातार छिटो हुन्छ । रगतको प्रवाह तपाईंको मुटु र मस्तिष्कतर्फ बढ्छ ।
विषालु तत्त्व घट्छ
बिस्तारै, गहिरो, लामो श्वास लिना शरीर डिटोक्सिफाईड हुन र शान्त भाव पैदा हुन सहयोग मिल्छ । राम्रो निद्रा लाग्छ । यदी अनिद्राको गुनासो छ भने सुत्नुभन्दा पहिले गहिरो श्वास लिनुस् । कार्बन डाइअसक्साइड (प्राकृतिक विषाक्त फोहर) श्वासमार्फत नै बाहिर आउँछ । छोटो श्वासले फोक्सोलाई कम प्रतिक्रिया गर्छ ।
डायफ्रम माथि र तल हुँदा रक्त प्रवाहको गति बढ्छ । यसबाट विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्छ ।
गहिरो श्वासस्वास्थ र जीवनशैली
केटा मान्छेले सेक्स सम्बन्धको बेलामा गर्ने ४ गल्ति…
चिसो मौसममा सुन्तलाको सेवन गर्नुका फाईदै फाईदा, जान्नुहोस के के फाईदा छन् ..
तपाईलाई सेक्स गर्न मन लाग्दैन ? यी हुन् यौन शक्ति बढाउने घरेलु उपाय..
चिसोबाट बच्न यी ५ घरेलु खानेकुरा आजैबाट खानुहोस, ग्यारेन्टीका साथ चिसोबाट बचिन्छ…